(L) Delta-FosB သည်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်ကြွက်များအားစိတ်ဖိစီးမှုမှကာကွယ်ပေးသည် (၂၀၁၀) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
စီးပွားပျက်ကပ်အတွက်ခံနိုင်ရည် Factor အနိမျ့, စိတ်ဖိစီးမှု မှစ. ကြွက်တွေကအကာအကွယ်ပေးတယ်
ကုသမှုအဖြစ်ဦးနှောက်ဆုကြေးတိုက်နယ် Eyed အတွက် Gene Regulator ပစ်မှတ်ထား
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်စိတ်ဖိစီးမှု, စိတ်ကျရောဂါမှအားနည်းချက်နှင့်မည်သို့စိတ်မကျဆေး Antidepressants အလုပ်ခံနိုင်ရည်ရှင်းပြဖို့အထောက်အကူပြုမယ့်ယန္တရားရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အသစ်တွေ့ရှိချက်များ, မောက်စ်နဲ့လူ့ဦးနှောက်၏အကျိုးကိုဆားကစ်အတွက် deltaFosB ကိုခေါ်အဲဒီမှာအဓိကဗီဇထိန်းညှိ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းဒြပ်ပေါင်းများကိုအဘို့အမြင့်မားသောနည်းပညာပိုကျကှနျအားမာန်ပါပြီ။
“ DeltaFosB အားဆုိုင်ရာပတ်လမ်း၏အချက်အချာတွင်အစပျိုးခြင်းသည်ခံနိုင်ရည်ရှိရန်လိုအပ်သည်သာမကလုံလောက်ကြောင်း၊ နာတာရှည်လူမှုစိတ်ဖိစီးမှုများပြီးနောက်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောရောဂါမျိုးမဖြစ်ပေါ်စေရန်ကြွက်များကိုကာကွယ်ပေးသည်” ဟုအမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာန၏အမျိုးသားအင်စတီကျု၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရန်ပုံငွေဖြင့်သုတေသနအဖွဲ့ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည့်သိနာတောင်ဆေးကျောင်းမှ MD အဲရစ်နတ်တာကရှင်းပြသည်။ (နိမ)
DeltaFosB ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်စိတ်ကျရောဂါကုသမှုသည်ဒီလူမှုရေးဆုတ်ခွာခြင်းလက္ခဏာကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထို့အပြင် deltaFosB သည်စိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရသောလူများ၏ ဦး နှောက်တွင်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်။ ထို့ကြောင့်ဤပရိုတင်းကို induction သည်အပြုသဘောလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ဖိစီးမှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်ကူညီပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် pharmacologically ပြင်ဆင်ရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေရန်မျှော်လင့်သည်” ဟုဆက်လက်ပေါင်းစပ်စိစစ်ရေးစီမံကိန်းကိုဆက်လက် ဦး ဆောင်သူ Nestler ကပြောကြားခဲ့သည်။
Nestler နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဂျာနယ်တွင်သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်အမဲလိုက်ခြင်းအွန်လိုင်းမေလ 16, 2010 မှုတ်သွင်းသောတွေ့ရှိချက်များကိုသတင်းပို့ပါ။
"ဒီသေးငယ်တဲ့မော်လီကျူးကိုရှာဖွေ (http://projectreporter.nih.gov/project_info_description.cfm?aid=7821642&icde=3502192) deltaFosB ၏လုပ်ရပ်များတိုးပွားကြောင်း (စိတ်ကျရောဂါများအတွက်ခံနိုင်ရည်-တိုးမြှင်ကုသမှု၏အသစ်တစ်ခုလူတန်းစားများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောရရှိထားသူhttp://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression/index.shtml), "NIMH ညွှန်ကြားရေးမှူးသောမတ်စ် R. Insel ကဆိုသည်။ “ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အမေရိကန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးအက်ဥပဒေအောက်တွင်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးသောစီမံကိန်းသည် (http://www.nimh.nih.gov/about/director/2009/nimh-and-the-recovery-act.shtml), ကြွက်စမ်းသပ်ချက်ကနေ ဦး ဆောင်အလျင်အမြန်တက်နောက်တော်သို့လိုက်နှင့်အလားအလာလက်တွေ့ applications များသို့ဘာသာပြန်ထားသောဘယ်လိုဘယ်လိုတစ် ဦး ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ "
DeltaFosB ဦးနှောက်ကိုအခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထက်, (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံကိုကြည့်ပါ), အကျိုးကိုအချက်အချာတွင်ပိုမိုတက်ကြွစွာသည်နျူကလိယ accumbens တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်အသုံးပြုမှု - သို့မဟုတ်ပင်ကိုသဘာဝဆုလာဘ် (http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&v2=1&ti=1,1&Search_Arg=101507191&Search_Code=0359&CNT=20&SID=1) ပိုလျှံသောအစားအစာ, လိင်သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းများကဲ့သို့ - တဖြည်းဖြည်းဆုကြေးငွေအချက်အချာ၌ဤကူးယူအချက်တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်သွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Nestler နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဤ deltaFosB တိုးပွားမှုသည်နောက်ဆုံးတွင်ထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်မှုများကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောတုံ့ပြန်မှုများတိုးပွားစေသည့်ဆဲလ်များ၌ကြာရှည်သောပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတစ် ဦး ချင်း၏ဆုလာဘ် circuit ကိုစွဲလမ်းစေခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြသခဲ့သည်။
ကြွက်နှင့်လူ့ Post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာဦးနှောက်အတွက်လေ့လာမှုအသစ်အတူတူဆုလာဘ် circuitry အလားတူ deltaFosB အပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှတဆင့်စိတ်ကျရောဂါအတွက် (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူထက်ပြောင်ဒီဂရီမှသော်လည်း) ယိုယွင်းကြောင်းအတည်ပြု။
စိတ်ဓာတ်လူနာမကြာခဏလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆုလာဘ်သို့မဟုတ်အပျြောအပါးကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်စွမ်းကင်းမဲ့ - နှင့်စိတ်ကျရောဂါများနှင့်စွဲမကြာခဏအတူတူသွားပါ။ အမှန်စင်စစ်, သုတေသီအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှတုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်သည့်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောရောဂါပြပွဲမှဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်တွေ့ပြီ။
ဒါပေမယ့်တူညီအဲဒီမှာအဆုံးသတ်ထားသည်။ deltaFosB အတွက် uptick စွဲအားပေးအားမြှောက်နေစဉ်အဘို့, သုတေသီများကလည်းစိတ်ကျရောဂါ-inducing စိတ်ဖိစီးမှုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးသည်ကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်ပါပြီ။ မတူညီတဲ့အဲဒီ receptor အမျိုးအစားများအားဖြင့်ပြုပြင် - - မူးယစ်ဆေးနှင့်သဘာဆုလာဘ်လုပ်ပေးထက်ဖွယ်ရှိဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုများအတွက်စာရင်းကိုင်ဒါဟာစိတ်ဖိစီးမှုနျူကလိယတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောရောနှောအတွက်ကူးယူအချက်ဆဲလ်အမျိုးအစားများ accumbens ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်ထွက်လှည့်။
အဆိုပါသုတေသီများ (စိတ်ကျရောဂါတစ်ခု mouse ကိုမော်ဒယ်အတွက် deltaFosB ၏ပြုပြင်ခြင်းစူးစမ်းhttp://www.nimh.nih.gov/science-news/2006/mice-lacking-social-memory-molecule-take-bullying-in-stride.shtml) ။ စိတ်ဓာတ်လူနာအဖြစ်တာတွေကတော့လူမှုရေးအဆက်အသွယ်မကြာခဏလူမှုရေးအရရှုံးနိမ့်ဖြစ်လာ 10 နေ့ရက်ကာလအဘို့နေ့စဉ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကြီးစိုးမောက်နေဖြင့်ကျူးကျော်ရန်ထိတွေ့ကြွက်တွေကနေဆုတ်ခွာ; သူတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပင်ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်အခြားကြွက်ရှောင်ကြဉ်ပါ။
အဆိုပါကူးယူအချက် deltaFosB သည်နျူကလိယ accumbens (NAc) တွင်ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်ဆားကစ်၏အချက်အချာခံနိုင်ရည် mediates ။ ဒါဟာခံနိုင်ရည်-တိုးမြှင်စိတ်မကျဆေး Antidepressants ၏အသစ်တစ်ခုလူတန်းစားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်က tweaks ကြောင်းသေးငယ်တဲ့မော်လီကျူးတစ်ခုအထူးကြပ်မတ်မြင့်မားတဲ့နည်းပညာစိစစ်၏ပစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရင်းမြစ်: အဲရစ် Nestler, MD ဆေးပညာသိနာတောင်ပေါ်ကျောင်း
စိတ်ဖိစီးမှုများကသွေးဆောင် deltaFosB ၏ပမာဏကိုစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်သို့မဟုတ်ခံနိုင်ရည်ဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါဟာအသင်းအဖွဲ့သင်ယူ, ဒါမှမဟုတ်ယဘေုယ, ရှိသမျှကြွက်ဖို့ဆန္ဒရှိအတွေ့အကြုံကိုဖို့ခိုင်မာတဲ့စိတ်သဘောထား counteracted ။
deltaFosB ၏ induction စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောရောဂါ reverse ဖို့လက္ခဏာ fluoxetine (Prozac) အတွက်လိုအပ်ခဲ့သည်။
deltaFosB ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုလျှော့ချအဆင့်ဆင့်ကနေအချိန်ကြာမြင့်စွာအထီးကျန်, စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူမှအားနည်းချက်တိုးပွားလာ။
ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောရောဂါကနေကြွက်ကာကွယ် - deltaFosB, ပရိုတိန်းဟာ AMPA အဲဒီ receptor ခံနိုင်ရည်ဘို့အရေးကြီးသည်ဟုခေါ်တွင်စေသည်တဲ့မျိုးဗီဇအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မြောက်မြားစွာပစ်မှတ်မျိုးဗီဇတွေထဲမှာ။ အဆိုပါ AMPA အဲဒီ receptor ကဓာတု messenger ကိုအချိုမှုမှချည်နှောင်အခါဆဲလ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင်ကြောင်းအာရုံခံအပေါ်တစ်ဦးပရိုတိန်းသည်။
စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူတိုးမြှင်လွယ်ကူစွာထိခိုက် glutamate မှ AMPA receptors ၏မြင့် sensitivity ကိုအားဖြင့်အစပျိုးအာရုံခံ၏တိုးမြှင့်လှုပ်ရှားမှု။
deltaFosB ၏ induction သည်အာရုံခံများကိုအေးဆေးငြိမ်သက်စေပြီး AMPA receptors ၏ glutamate နှင့်ထိတွေ့မှုကိုဖိအားပေးခြင်းဖြင့်စိတ်ကျဝေဒနာမှကာကွယ်ပေးသည်။
စိတ်ဓာတ်လူနာ post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာဦးနှောက်တစ်သျှူးလက္ခဏာကုသမှုဆင်းရဲသားကိုတုံ့ပြန်မှုကူးယူအချက်၏အားနည်းသော induction ရန်, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက် traceable ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုခြင်း, ထိန်းချုပ်မှု၏အဖြစ်တာ deltaFosB အဖြစ်ခန့်သာထက်ဝက်ပါရှိသည်။
ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အကျိုးကိုအချက်အချာအတွက် deltaFosB လျှော့ချစိတ်ကျရောဂါများ၌တွေ့မြင်ချို့ယွင်းလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆုလာဘ်အပြုအမူများအတွက်အကောင့်စေရန်ကူညီပေးသည်, Nestler ကဆိုသည်။ ဒါကြောင့်တိုးတက်စိတ်ဖိစီးမှုကြားမှဂိုးညွှန်ကြားအပြုအမူကိုလိုက်ရန်တစ်ဦးချင်းကို enable ပုံပေါ်ပါတယ်။
အဆိုပါအဆင့်မြင့်နည်းပညာစိစစ် (http://www.nimh.nih.gov/science-news/2009/high-tech-robots-efforts-bear-fruit-thanks-to-nih-roadmap.shtml) ကို Recovery ကိုအက်ဥပဒေထောက်ပံ့ကြေးကထောက်ခံ, DeltaFosB မြှင့်တင်ရန်ကြောင်းမော်လီကျူးအဘို့, လူတွေနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကူညီမယ်လို့ဆေးဝါးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါမော်လီကျူးလည်းအလားအလာ deltaFosB ပြောင်းလဲမှုများထင်ဟပ်နေဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကျဝေဒနာရှင် '' ကုသမှုတိုးတက်မှုည့်ကျဇယားမှဦးနှောက်ပုံရိပ်ထဲမှာတွေ့ခဲ့ရဘူး tracers အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်, Nestler ကဆိုသည်။
အဆိုပါ NIMH ၏မစ်ရှင်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ရောဂါပျောက်ကင်းဘို့လမ်း, အခြေခံများနှင့်လက်တွေ့သုတေသနမှတစ်ဆင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမကျန်း၏နားလည်မှုနှင့်ကုသမှုအသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.nimh.nih.gov.
ကနျြးမာရေး (NIH) ၏အမျိုးသား Institutes အကြောင်း: နိုင်ငံ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနအေဂျင်စီ NIH တွင်အင်စတီကျုးရှင်း ၂၇ ခုနှင့်စင်တာများပါဝင်ပြီးအမေရိကန်ကျန်းမာရေးနှင့်လူသား ၀ န်ဆောင်မှုဌာနတွင်ပါဝင်သည်။ NIH သည်အခြေခံကျသော၊ လက်တွေ့နှင့်ဘာသာပြန်ခြင်းဆိုင်ရာဆေးသုတေသနကို ဦး ဆောင်။ ပံ့ပိုးပေးသောဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီဖြစ်သည်။ ဘုံနှင့်ရှားပါးသောရောဂါများအတွက်အကြောင်းရင်းများ၊ ကုသမှုများနှင့်ကုသမှုများကိုစုံစမ်းနေသည်။ NIH နှင့်၎င်း၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ http://www.nih.gov.
NIH ... ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကျန်းမာရေးသို့လှည့် ®
ဒီလွှတ်ပေးရန်အတွက်ဖော်ပြထားတဲ့လှုပ်ရှားမှုများအမေရိကန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် Reinvestment အက်ဥပဒေ (ARRA) မှတဆင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ ARRA မှတဆင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့ HHS လှုပ်ရှားမှုများ၏တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံရန်, သွားရောက်လည်ပတ် www.hhs.gov/recovery။ အဆိုပါ ARRA မှတဆင့်အားလုံးကိုဖက်ဒရယ်ရန်ပုံငွေ, အလည်အပတ်ခရီးကိုခြေရာခံရန် www.recovery.gov.
ဦးနှောက်အကြိုးကိုဆားကစ်အတွက် DeltaFosB စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုမှခံနိုင်ရည် mediates ။ Vialou V ကို, Robison AJ, LaPlant QC, Covington III ကိုသူ, Dietz DM, Ohnishi yn, Mouson အီး, Rush III ကို AJ, Watts EL, Wallace DL, Iniguez SD, Ohnishi YH, Steiner MA, Warren B, Krishnan V ကို, Neve RL, Ghose S က, Beron အို Tamminga, CA, Nestler EJ ။ NatNeurosci ။ EPub 2010 မေလ 16 ။